Fa maninona Andriamanitra no mampijaly ny Kristiana - Fiangonan'Andriamanitra Suisse manerantany
lahatsoratra > Fiainana miaraka amin'Andriamanitra > Nahoana Andriamanitra no mampijaly ny Kristianina?
Amin'ny maha-mpanompon'i Jesosy Kristy antsika, dia matetika isika no angatahana hanome fampiononana ny olona rehefa mandalo karazana fijaliana isan-karazany. Amin'ny fotoanan'ny fijaliana, dia asaina isika hanome sakafo, fialofana na akanjo. Saingy amin'ny fotoan'ny fijaliana, indraindray isika dia asaina manazava hoe nahoana no avelan'Andriamanitra mijaly ny Kristianina, ankoatra ny fangatahana fanamaivanana ara-batana. Ity no fanontaniana sarotra hovaliana, indrindra rehefa anontaniana amin'ny fotoana fahakiviana ara-batana, ara-pihetseham-po, na ara-bola. Indraindray ny fanontaniana dia apetraka amin'ny fomba iray manontanio ny toetran'Andriamanitra.
Ny fiheverana ny mijaly Kristiana ao amin'ny kolontsaina tandrefana indostrialy dia matetika tsy mitovy amin'ny an'ny fijaliana Kristiana any amin'ny faritra mahantra kokoa ara-toekarena. Amin'ny maha kristiana antsika, inona no antenaintsika manoloana ny fijaliana? Ampianarina ny kristiana sasany fa rehefa tonga kristiana izy ireo dia tsy tokony hijaly intsony eo amin’ny fiainany. Ampianarina izy ireo fa ny fijaliana kristiana dia noho ny tsy fisian'ny finoana.
Hebrio 11 dia antsoina matetika hoe ny finoana. Ao anatin'izany dia misy olona deraina noho ny finoany matoky. Anisan'ireo olona voatanisa ao amin'ny Hebreo 11 ireo mila fanampiana, nenjehina, nampijalina, nampijaliana, nokapohina ary novonoina (Hebreo 11: 35-38). Mazava fa ny fijalian'izy ireo dia tsy vokatry ny tsy fahatokisana, satria voatanisa ao amin'ny toko "Finoana" izy ireo.
Ny fijaliana dia vokatry ny fahotana. Tsy ny fijaliana rehetra anefa no vokatry ny fahotana eo amin’ny fiainana kristianina. Nandritra ny fanompoany teto an-tany, dia nahita lehilahy iray teraka jamba i Jesosy. Nangataka an’i Jesosy ny mpianatra mba hamantatra ny loharanon’ny fahotana izay nahatonga an’ilay lehilahy teraka jamba. Nihevitra ny mpianatra fa satria teraka jamba ilay lehilahy, dia ny fahotan’ilay lehilahy no nahatonga ny fijaliana, na angamba ny fahotan’ny ray aman-dreniny. Rehefa nasaina hamantatra ny ota nahatonga ny fahajambana i Jesosy dia namaly hoe: Tsy io no nanota, na ny ray aman-dreniny; fa ao aminy no hanehoana ny asan’Andriamanitra” (Jao. 9,1-4). Indraindray Andriamanitra dia mamela ny fijaliana eo amin’ny fiainan’ny Kristiana ho fotoana iray hanehoana ny filazantsaran’i Jesoa Kristy.
Ireo Kristianina tamin’ny taonjato voalohany dia azo antoka fa tsy nanampo ny fiainana kristiana tsy nisy fijaliana. Nanoratra izao manaraka izao ny apostoly Petera ho an’ireo rahalahiny sy anabaviny ao amin’i Kristy (1 Pet. 4,12-16): Ry malala, aza mety ho tafintohina amin’ny fahoriana manjo anareo ianareo, toy ny manjo anareo zavatra hafahafa; fa araka ny iombonanareo amin’ny fijalian’i Kristy, dia mifalia, mba hifalianareo koa amin’ny fisehoan’ny voninahiny. Sambatra ianareo raha haratsiana noho ny anaran'i Kristy! Fa ny Fanahin'ny voninahitra no mitoetra ao aminareo; miaraka amin'ireo no itenenan-dratsy Azy, fa miaraka aminareo kosa no ankalazana Azy. Koa aoka tsy hisy aminareo hijaly satria mpamono olona, ​​na mpangalatra, na mpanao ratsy, na mitsabaka amin'ny zava-mahagaga; Fa raha mijaly amin’ny maha-Kristianina azy, dia tsy tokony ho menatra izy, fa tokony hanome voninahitra an’Andriamanitra amin’izany!
Tsy tokony ho ampoizina ny fijaliana amin'ny fiainana kristiana
Tsy esorin'Andriamanitra foana ny fijaliana. Nalahelo mafy ny apostoly Paoly. Intelo izy no nangataka tamin’Andriamanitra mba hanala izany fijaliana izany taminy. Tsy nesorin’Andriamanitra anefa ny fijaliana satria ny fijaliana dia fitaovana nampiasain’Andriamanitra hanomanana ny apostoly Paoly ho amin’ny fanompoany ( 2 Kor. 1 Kor.2,7-10). Tsy esorin’Andriamanitra foana ny fahoriantsika, fa fantatsika kosa fa Andriamanitra no mampionona sy mampahery antsika amin’ny fahoriantsika ( Filipiana 4:13 ).
Andriamanitra ihany indraindray no mahalala ny anton’ny fijaliantsika. Andriamanitra dia manana fikasana ny amin’ny fijaliantsika na manambara ny fikasany amintsika na tsia. Fantatsika fa Andriamanitra dia mampiasa ny fijaliantsika ho tombontsoantsika sy ho voninahiny (Rom. 8,28). Amin’ny maha-mpanompon’Andriamanitra antsika, dia tsy afaka mamaly ny fanontaniana hoe nahoana Andriamanitra no mamela ny fijaliana hisy amin’ny toe-javatra rehetra, kanefa fantatsika fa ambony Andriamanitra ary mifehy tanteraka ny toe-javatra rehetra (Dan. 4,25). Ary io Andriamanitra io dia atosiky ny fitiavana satria Andriamanitra dia fitiavana (1. Jao. 4,16).
Fantatsika fa fitiavana tsy misy fepetra no itiavan’Andriamanitra antsika (1 Jao. 4,19) ary Andriamanitra tsy mahafoy na mahafoy antsika (Heb. 13,5b). Rehefa manompo an’ireo rahalahy sy anabavintsika mijaly isika, dia afaka maneho fangoraham-po sy fanohanana tena izy amin’ny fikarakarana azy ireo ao anatin’ny fisedrana. Nampahatsiahy ny Eglizy Korintiana ny apostoly Paoly mba hifampahery amin’ny fotoam-pahoriana.
Nanoratra izy (2 Kor. 1,3-7) Isaorana anie Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain'ny famindram-po sy Andriamanitry ny fampiononana rehetra, Izay mampionona anay amin'ny fahorianay rehetra, mba hampionona anay amin'ny fampiononana amin'ny fahoriana rehetra. izay ampiononan'ny tenanay. Fa tahaka ny fandatsahana be dia be aminay ny fijalian'i Kristy no itondran'ny fampiononana anay koa amin'ny alalan'i Kristy.
Raha mijaly izahay, dia ho fampiononana sy famonjena anao izany, izay hanaporofo fa mahomby amin'ny fiaretana ireo mijaly mitovy aminy izay iharetantsika; raha nampiononina izahay, dia ho fampiononana sy famonjena anao izany; ary ny fanantenanay anao dia azo antoka, satria fantatray: toy ny anjaranao mijaly, dia toy izany koa amin'ny fampiononana.
Ny salamo dia loharano tsara ho an'izay mijaly; satria maneho alahelo sy fahasorenana ary fanontaniana momba ny fitsapana mahazo antsika izy ireo. Araka ny asehon’ny Salamo, dia tsy hitantsika ny antony mahatonga ny fijaliana, nefa fantatsika ny loharanon’ny fampiononana. I Jesoa Kristy Tompontsika no loharanon’ny fampiononana amin’ny fahoriana rehetra. Hampahery antsika anie ny Tompontsika eo am-panompoantsika ny olona mijaly. Aoka isika rehetra hitady fampiononana ao amin’i Jesosy Kristy Tompontsika amin’ny fotoam-pahoriana, ka hitoetra ao aminy mandra-pahatongan’ny andro hanalany mandrakizay ny fijaliana rehetra eo amin’izao rehetra izao (Apokalypsy 2 Kor.1,4).
Nataon'i David Larry
Nahoana Andriamanitra no mamela ny Kristianina hijaly?